I-Apple Music inokusasaza kuphela uxwebhu lwekhonsathi yeNkosana ye-1983 | Ndisuka mac
Ngaphantsi kule minyaka izayo, isicwangciso-qhinga seenkonzo zosasazo lomculo ziya kujoliswa ngendlela ethile, kumsebenzi wokhethekileyo, zombini iikonsathi kunye neerekhodi ezinokukhutshwa. Okokugqibela i-Apple Music iya kuba kukusasazwa kwamaxwebhu ekhonsathi erekhodwe yiNkosana kukhenketho lwayo lwecwecwe lakhe lodumo i-Purple Rain, edlalwa kwidolophu yakulo mculi waseMinneapolis. Kuyabonakala ukuba ukuthengwa kwamalungelo akuqinisekiswanga, njengoko iSpotify nayo inokuba nomdla.
Bathetha ngamanani eenkwenkwezi ekuthengweni kwamalungelo. Ukunqaba kwemifanekiso, kunye nokufa komculi kutsha nje, kwenza ukuba iifizi zibize kakhulu lonto kufuneka ihlawulwe ngabo bafuna ukuthatha amalungelo abo. Eminye imithombo ibonisa ukuba uSpotify akazukuvuma ukwenza intengiselwano. Ndiza kubakho kuphela UTroy carter, Ulawulo lweSpotify, ukuza kuthi ga ngoku ungumcebisi kwiindlalifa zamalungelo amagcisa. Kubalandeli beNkosana yaseMinneapolis, yikhonsathi yasentsomini, kuba yayiyikhonsathi eyothusayo apho iNkosana yadlala khona umxholo owaziwayo iPurple Rain okokuqala.
Ayisiyi-Apple kuphela, kodwa ikunye ne-lEzona nkonzo zisasazwayo zokusasaza umculo ziyandisile ikhathalogu yeNkosana okoko wasweleka ngoFebruwari 2016. I-Apple ibisenza ukuba silisebenzise eli cebo amaxesha ngamaxesha. Ngokudalwa kwenkonzo kwihlabathi liphela utaylor Swift owapapasha uxwebhu olubonisa ukhenketho lwakhe lwehlabathi ngo-1989. Kodwa kutshanje, ubhengeze uxwebhu malunga Utata uyakhukhumala, ekulindeleke ukuba ikhutshwe ngoJuni olandelayo.
I-Apple Music izama ukubetha iinombolo zikaSpotify ngezenzo ezinje. Nangona kunjalo, kunzima ukuba ngenye imini ibe nakho ukubamba isigebenga somculo, kuba ithuba lokugqibela liqela lemidlalo, apho liphuhlisiwe ukusukela oko laqalwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » I-Apple Music ingasasaza kuphela uxwebhu lwekhonsathi yeNkosana ka-1983